Somaliland.Org » Miisaaniyda Sanadaka 2005
January 20th, 2005 Comments Off Dhaqaala xumida iyo gaajada Afrika ka taagan waxa ugu wacan maamul xumo, musuq, qaynuun xumo iyo dagaal joogta ah. Haddii miisaaniyada 2005 ee Somaliland aynu metal u soo qaadano intuba way ka muuqdaan (maamul xumo’u, musuq, sharci daro iyo qaban qaabo dagaal). Miisaaniyada haddaan loo isticmaalin sidii loogu talagalay waa denbi waxa iyana kale oo danbi ah cashuur aan la ansixin in la hirgeliyo. Waxa cad in labadaa denbiba laga galay ummada marka aad ka tilmaan qaadato miisaaniyadii loogu talagalay dhameystirka shuruucda sannadkii hore (2004) oo aheyd $79,923 oo lagu edeynaayo’u in Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Qeybe uu u isticmaalay si aan qaynuu’o'onka waafqsaneyn. Sida uu isaguna wasiirka maaliyadu golaha wakiilada ka hore qirtay cashuuur aan la ansixin ayuu hirgeleyay. Waxa weliba inta dheer in Wasiirku uu qirtay in kharashka ku qayaxan miisaaniyada (2005) qaarkood laga been fariimaayo. Haddaad u heysatay dawlada Somaliland in ay ku xad gudubto xuquuqol insaanka oo qudha dib isugu noqo. Distoorku ansixinta qawaaniinta waxa uu u xil saaray baarlamanka oo qudha. Wasiir iska daayoo xataa Madaxweynuhu ma ansixin karo Haddana waxa la ogyahay in sidii wasiirka maaliyadu (Cawil) uu ka qirtay baarlamanka in uu cashuuraha qaarna kordhiyay qaar cusubna sameeyay soo ururintoodana hirgeliyay iyada oo aanu baarlamanku ansixin. Taasi waxa ay kuu cadeyneysaa in Wasiirku u badheedhay in uu cashuur aan sharci ku salaysneyn hirgeliyo isaga oo aan baarlamankii waxba isaga tirineyn in uu sida uu doonnana ugu tagrifali karo. Tani waa mid hor leh oo ay tahay in xeer ilaaliyaha guud iyo baarlamanku ay ka hawl galaan. Nin walba halkii bugtaa isagaay belbeshaa miisaaniyadona haddi aan baahiba baahida ay ka mudantahay aan laga fuudh yeelin amba sidee loogu tala galay loo isticmaalin waa hal bacad lagu lisay. Haddaba miisaaniyada 2005 ee baarlamanku maanta ansixiyay waa mid sii dhid beysa siina baaheneysa baahida dhaqaale ee loogu tala galay in ay khafiifiso. Waa mid aan meel aan baahi jirin loo bedeyay, waa mid lagu badhxay cashuur aan sharci aheyn, waana mid lagu hafraayu agoomaha iyo Naafada, waa mid aan horumarkii wax la sheegi karo aan looga qoondeyn, waa mid Cabdi Xasan Buuni ka yeeshay boqorkii martiqaadka $7,123, waa mid Madaxweynaha iyo Mw/kuxigeeenka ka yeeshay kuwii ugu mushahar badna Madaxda Afrika iyo Europe, waa mid dakhligee dekkedda Berbera, dakhligee Haamaha TOTAL, kii madbacada iyo ili dhaqaali oo kalaba ka dul booday waa mid isku soo wada duuboo himilada Somaliland soof daran habaabinaaya. Cashuur aan la ansixin oo la hirgeliyaa waa kow. Waxa se caado noqotay in si kastaba ha lagu soo ururiyee ay in badani khasnada dawlada garab marto qaarna loo isticmalo si aan laaqi aheyn. Farsama xumida ceynkas ihi waay ku barra kicisaa. Waxana ka mid ah aan idiin horeyseeyo miisaaniyada Somaliland 2005 oo lagu qiyaasay ila iyo 22 milyon oo dollar ($1=6,739 S/L) boqolkiiba tobban (10%) iyo jar jar ($2,260,630) ayaa ku baxa mushaharka Madaxweynaha, Mw/ku-xigeenka iyo Madaxtooyada. Aan ku sii bal balaadhiyo. Labbiyo toban milyan oo dollar iyo weliba jarjar $12,120,276 waa xoolo dameer gooya. Xoolaha inta leegi marka laga shidaal qaato labbadii sanno ee u denbeeyay waxa weyaan musharka Madaxweynaha ($2,931,528), ka MW/kuxikenka($872,038) iyo kharashka Madaxtooyada ($8,316,710) shanta sanno ee ay xukunka heynayaan. Mushaharka intaa leeg ayo nin mar Hargeysa Mayor ka ahaan jiray madaxda UDUBna ka mid ah oo la yidhaahdo Caawl Elmi Cabdala uu mar uu magaalada Bristol ee ingreeska ka hadlaaya shir UDUB isugu timid kaga dhawaaqay in Madaxweynaha Mushaharka loo kordhiyo. Cawl la yaab ma laha oo markii uu Mayorka ahaa mushahar u xadidnaa ma jirin ee hadba inta kacantiiso qaado ayuu rujin jiray Sannadka maanta ah waxa aad moodaa in ay ka soo dhacday Madaxweynaha iyo MW/kuxigeenka waxa ay ka mushahar badan yihiin Madaxweynaha iyo MW/kuxigeenka Maraykanka oo mushaharkoodu ka la yahay $400,000 iyo $186,320 sida awgeed Rayaale waxa uu iska dhimay boqol kiiba labaatan (20%) MW/kuxigeenkuna boqolkiiba (5%). Taasina waxa ay mushaharkoodii hoos ugu soo riday sidan $385,876 iyo $170,827. Hadduu Rayaale is lahaa hakaa hadho mushahar kaga oo la garab dhigo ka Madaxweynaha Mareeykanka waxa uu iloobay in uu weli yahay Madaxweynaha ugu Mushaharka badan qaarada Africa iyo Europe ba. Dhinac kale haddi aad ka eegto Mushaharka Madaxweynuhu ($385, 876) waxa uu ka badenyahay miisaaniyada lix wasaaradood oo la isku darro kuwaas oo kala ah